लकडाउन के हो? के–के हुन्छ यस्तो अवस्थामा?
विज्ञ भन्छन्– लकडाउन गर्ने हो भने मानवीय सहायतालाई ख्याल गर्नैपर्छ
२०७६ चैत ७ शुक्रबार १७:३०:०० प्रकाशित
काठमाडौं – विश्व स्वास्थ्य संगठनले मार्च ११ अर्थात् फागुन २८ गते कोरोना भाइरसलाई विश्वव्यापी महामारीको रुपमा घोषणा गर्‍यो।
त्यही दिन नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भन्यो, ‘महमारी फैलिएको अवस्थामा पकेट एरिया लकडाउन गर्ने योजना छ।’
कोरोन नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि तयारी अगाडि बढाइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले योजना २ अन्तर्गत लकडाउनको विषय राखेको थियो। मन्त्रालयको योजना २ अन्तर्गत कोरोनाको महामारी फैलिएको अवस्थामा मात्र लकडाउन गर्ने तयारी थियो।
जसमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको अवस्थामा मात्र बासस्थान, निश्चित समुदाय, बस्ती, गाउँ, टोल, वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेशलाई पनि पकेट एरियामा राख्दै लकडाउन गर्न सकिने उल्लेख छ।
नेपालमा अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छैन। तर नेपाल उच्च जोखिममा भने छ। यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा पनि तत्कालै लकडाउन हुन सक्ने विषय निकै चर्चा र बहस भइरहेको छ। यद्यपि सरकारले आधिकारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। भारतले पनि कोरोनाको महामारी रोकथामका लागि जनता कर्फ्यु लगाउने निर्णय गरिसकेको छ।
के हो लकडाउन?
चीनको वुहानमा कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला त्यहाँका जनता प्रहरीको कठोर निगरानी र सुरक्षामा थिए। उनीहरुले अनुमतिबिना आवतजावत गर्न पाएका थिएनन् भने विद्यालय, बजार, बैंक, रेष्टुरेन्ट सबै बन्द भएका थिए।
यी सब वुहानमा देखिएको कोरोनाको महामारी अन्य प्रान्तमा नफैलियोस् भन्नका लागि चीन सरकारले लिएको नीति थियो।
सामान्य भाषामा भन्दा सरकारको कठोर निगरानी र सुरक्षा नै लकडाउन हो। जुन कुनै पनि महामारी एक स्थानबाट अर्को स्थानमा नफैलियोस भन्नका लागि गरिन्छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा बाबुराम मरासिनीका अनुसार लकडाउन भनेको कुनै निश्चित क्षेत्रलाई सरकारले बन्द गर्नु हो। उक्त क्षेत्रलाई प्रहरीले चारै तिरबाट घेरा हाल्छ।
मानिसको भीडभाडलाई कम गर्नु नै लकडाउनको मुख्य उद्देश्य हो। लकडाउनलाई डा मरासिनीले 'हेल्थ कस्टडी'को नाम दिएका छन्।
यो एक प्रकारको कर्फ्यु जस्तै हो। कर्फ्यु निश्चित समयका लागि हुन्छ भने लकडाउनको समय रोग अनुसार हुने उनले बताए।
लकडाउन गरिएको क्षेत्रमा विद्यालय, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, बैंक लगायत मानिसको भीडभाड हुने सबै ठाउँ बन्द हुन्छ। मानिसहरु घरबाट आवत जावत गर्न पाउँदैनन्।
‘मानवीय सहायता बढाउनुपर्छ’
नेपालमा लकडाउन हुन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला विज्ञहरु भने लकडाउन गर्न सहज नहुने बताउँछन्।
डा मरासिनीले भने, ‘सरकारले लकडाउन गर्ने भनेर मात्र हुँदैन। मानवीय सहायताको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अत्यावश्यक वस्तुहरु सरकारले व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। लकडाउन घोषणा गरेजस्तो कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज छैन।’
सरकारले लकडाउनसँगै मानवीय सहायतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। बिहान कमाएर बेलुकी खाने पनि धेरै छन्। उनीहरुले के गर्ने? ग्यास सकियो, खानेकुरा सकियो भने घर–घरमा पु¥याउने व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्छ? उनले प्रश्न गरे।
लकडाउन गर्ने हो भने सरकारले आफ्नो तयारी बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ।
सरकारले मानिसको भीडभाड कम गर्न यसअघि नै विद्यालय, सिनेमा हल, हेल्थ तथा जिम सेन्टर बन्द गर्न आदेश दिइसकेको छ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
२. कोभिड–१९ उपचार : नेपालमा आयुर्वेद औषधिको क्लिनिकल ट्रायल